गर्भमै बच्चाको वृद्धि विकास र रोग पत्ता लगाउने प्रविधि ‘अल्ट्रासाउण्ड’ के हो? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
गर्भमै बच्चाको वृद्धि विकास र रोग पत्ता लगाउने प्रविधि ‘अल्ट्रासाउण्ड’ के हो?
कमला गुरुङ शनिबार, जेठ २१, २०७९, ०६:०५:००
काठमाडौं - गर्भावस्थामै शिशुको वृद्धि विकास र स्वास्थ्य अवस्था पत्ता लगाउन सकिने प्रविधिमध्ये एक हो, अल्ट्रासाउण्ड।
गर्भमा रहेको शिशुको वृद्धि विकास कस्तो छ? कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ/छैन लगायत अल्ट्रासाउण्डबाट थाहा पाउन सकिन्छ। सामान्यतया अल्ट्रासाउण्डलाई धेरैले भिडियो एक्सरे भनेर पनि बुझ्ने गर्छन्। तर यी दुई फरक भएको कन्सल्टेन्ट फिटल एवं प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा खुश्बू श्रीवास्तव बताउँछिन्।
गर्भावस्थामा अल्ट्रासाउन्ड किन गर्ने? यसको महत्व के छ? लगायत विषयमा हामीले डा श्रीवास्तवसँग थप बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको भिडियो कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः
अल्ट्रासाउण्ड भनेको के हो?
– अल्ट्रासाउण्ड भनेको एक किसिमको प्रविधि हो।
– अल्ट्रासाउण्डमा एउटा साउण्ड वेभ हुन्छ। यसको मार्फत नै शरीर भित्रका कुनै पनि अंगलाई हेर्न सकिन्छ।
– अल्ट्रासाउण्ड सामान्यतया महिलाको पाठेघर, अण्डा, वरिपरिका अंग र शिशुको वृद्धि विकासको लागि प्रयोग गरिन्छ।
गर्भावस्थामा अल्ट्रासाउण्डको महत्व के हुन्छ? किन गर्ने?
– गर्भवतीमा अल्ट्रसाउण्डको महत्व धेरै हुन्छ।
– अल्ट्रासाउण्डकै माध्यमबाट गर्भभित्र रहेको शिशुको बनावट, वृद्धि विकास थाह पाउन सकिन्छ।
– आमाको पाठेघरमा समस्या भए/नभएको पनि थाहा पाउन सकिन्छ।
– गर्भवती अवस्थामा सिटि स्क्यान, एक्सरे, एमआरआई गर्दा बच्चालाई असर पु¥याउँछ। तर अल्ट्रासाउण्ड सुरक्षित हुन्छ।
अल्ट्रासाउण्ड शिशुको लागि किन सुरक्षित भनिएको हो?
– हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार अल्ट्रासाउण्ड गर्छौं। त्यसैले यो सुरक्षित छ।
– सामान्य खालको अल्ट्रासाउण्डले शिशुलाई असर गर्दैन। तर कलर, डप्लरले भने ताप उत्पादन हुन्छ। तर शिशुलाई कुनै खराबी गर्दैन।
अल्ट्रासाउण्ड कहिले र कति पटक गर्ने?
– सामान्यतया अल्ट्रासाउण्ड कम्तीमा पनि चार पटकसम्म गर्नुपर्छ।
– बच्चाको वृद्धि विकासमा कुनै समस्या देखियो भने उनीहरुको आवश्यकता अनुसार चार पटकभन्दा बढी अल्ट्रासाउण्ड गर्नुपर्छ।
– चारमध्ये पहिले अर्ली प्रेग्नेन्सी स्क्यान हो। यो आमाले गर्भमा बच्चा छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि गरिन्छ।
– यो अल्ट्रसाउण्ड ६ देखि ७ हप्ताको बीचमा गरिन्छ।
– बच्चा गर्भमै छ/छैन, धड्कन आइसकेको छ/छैन, रगतमा समस्या भए/नभएको लगायत हेरिन्छ।
– दोस्रो, एन्टी एन्बी स्क्यान हो। यो ११ हप्तादेखि १३ हप्ता ६ दिनमै गर्नुपर्छ। यो भन्दा एक दिन अघि वा पछि गर्न मिल्दैन।
– बच्चाको घाँटी पछाडी रहेको पानीको तहबाट डाउन सिन्ड्रोम हुन सक्छ/सक्दैन भनेर संभाव्य भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ।
– बच्चामा हुन सक्ने बनावटी खराबी पनि यो समयमा पत्ता लगाउन सकिन्छ।
– अर्को महत्वपूर्ण भिडियो एक्सरे हो, एनोमली स्क्यान। १८ देखि २२ हप्ताभित्रमा यो गर्नुपर्छ।
– बच्चामा कुनै बनावटी खराबी छ/छैन भनेर हेर्नु र त्यसको पहिचान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो।
– टाउकोदेखि खुट्टासम्म सबै एक/एक अंगहरुमा भएको खराबी यो स्क्यानमा हेरिन्छ।
– एनोमली स्क्यानमा सबै कुरा राम्रो छ भने ग्रोथ स्क्यान गरेपछि अन्य गर्नुपर्दैन।
– ग्रोथ स्क्यान २८ देखि ३२ हप्तामा गर्नुपर्ने हुन्छ। यदी बच्चा वा आमामा कुनै समस्या देखिए मात्र अन्य स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ।
– यी चार वटा बाहेक अर्को महत्वपूर्ण फिटो इको पनि हो।
– बच्चा वा आमामा कुनै समस्या देखियो भने बच्चाको फिटल इको गरेर हेर्नुपर्छ।
– फिटल इकोमा बच्चाको मुटुको अवस्था विस्तृत रुपमा हेरिन्छ।
– फिटल इको २४ हप्तामा गर्नुपर्छ।
– यो सहित बच्चाको मस्तिष्कको अवस्था हेर्न फिटल न्यूरो सोनोग्राम हेर्नुपर्छ।
– बच्चामा रगतको सञ्चारमा समस्या छ/छैन भनेर डप्लर स्क्यान गरेर पनि हेर्न सकिन्छ।
– बच्चामा कुनै समस्या आए डप्लर स्क्यान हप्ताको दुई पटकसम्म पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
अल्ट्रासाउण्डको माध्यमबाट कुनै बच्चा शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भए/नभएको थाहा पाउन सकिन्छ?
– अल्ट्रासाउण्डमा बच्चाको बनावट, वृद्धि विकास सबै हेर्ने भएकाले अपाङ्गता भए/नभएको पनि थाहा पाउन सकिन्छ।
– एन्टी एन्बी स्क्यानमा गर्ने अल्ट्रासाउण्डमै अपाङ्गता भए/नभएको थाहा पाउन सकिन्छ।
– यो सँगै शरीर हड्डीहरु कहिले काँही खुम्चिएका हुन्छन्। ती सबै पनि पाउन सकिन्छ।
यी चार वटै स्क्यानहरु गराउने आमाहरुको संख्या कति छन्?
– अल्ट्रासाउण्डको बारेमा विस्तृत जानकारी अहिले पनि धेरैलाई छैन।
– अझै पनि एन्टी एन्बी स्क्यान धेरैले गर्दैनन्। ५/६ महिनापछि मात्र आउँछन्।
– यी स्क्यानहरु धेरै महँगो पनि छैन। तर सबैलाई यो बारे जानकारी भने छैन।
– यी स्क्यानहरु धेरै महत्वपूर्ण छन् भनेर आमाहरुले बुझ्नु आवश्यक छ।
– अल्ट्रासाउण्डलाई धेरैले भिडियो एक्सरेका रुपमा पनि बुझ्छन्। तर भिडियो एक्सरे र अल्ट्रासाउण्ड बीच फरक छ।
– समयमै अल्ट्रासाउण्ड गरियो भने भविष्यमा बच्चाहरुमा आउन सक्ने समस्याको बेलेमै पहिचान गरी समाधान गर्न सकिन्छ।
भिडियो: निमेष जंग राई